Spectrocoin Debit Card Review - Bitcoin Card Kuenzanisa 2018
Spectrocoin.com ndehwokuti kugovera zvose-in-rimwe basa bitcoin vanoshandisa. Pedyo bitcoin chikwama, wavanotipa Exchange mabasa, mumwe bitcoin debit kadhi, uye mhinduro vatengesi nokubvuma bitcoin kwavo zuva mabhizimisi mabasa. Spectrocoin kubatanidzwa muzvigadzirwa akavimbika pamwe infrastructural comprehensiveness kuti pave yepamusoro bitcoin basa ayo vatengi.
Services Kunopiwa Spectrocoin
Spectrocoin inopa mberi-kuti-musana mabasa nokuti munhu wose kushandisa bitcoin pose. Vane bitcoin e-chikwama inogona mari kubudikidza BitCoins yakatengwa voga Exchange zvakananga. The bitcoin debit kadhi kunoita mari BitCoins sezvo nyore sezvo Fiat mari. The kambani zvakare inopa mhinduro mushambadzi saka vanogona kugamuchira bitcoin kuburikidza zvavo zvebhizimisi mabasa. Kuitira kuti kusangana sezvo nyore sezvinobvira kuti vose kunze ive API, Spectrocoin anotipa eCommerce plugins uye Maraibhurari nekuti vatengesi uye nokuda chikwama.
Bitcoin debit kadhi iri mari pakarepo bitcoin, saka hapana chikonzero kuchinjana mashoko cryptocurrency chinotangira mubhadharo. Visa uye mapurasitiki Makadhi zvinogona kushandiswa chero ATM munyika, ari denominated nechigadziko mari ndiwo USD, EUR uye GBP. Vose mapurasitiki uye rakapotsa makadhi vanogamuchirwa panguva zvinopfuura 20 miriyoni nzvimbo paIndaneti zvitoro mhiri internet. Ivo zvinopawo nezvechisarudzo zvebhizimisi varidzi kuti chinja kuti bitcoin muripo akavhiyiwa. Spectrocoin anopa makadhi kambani sechinhu mhinduro vaya vari mumwe danho mberi munyika digitaalinen nyika.
Spectrocoin kadhi - kusiyana nemimwe kadhi bitcoin debit - iri aendeswe chero nyika wenyika, kusanganisira India uye China zvakare uye dziripo US vagari pamwe. Normal kutumirwa kana vakasununguka uye kadhi anosvika 3-4 mavhiki. Kana munhu uchida rikurumidze kutumirwa, nokuti dzimwe muripo weUS $ 75 / ?? 69 / £ 50 Expedited kutumirwa nezvechisarudzo inowanikwa. Panyaya iyi kadhi zvinogona inodzidzisa ?? kwaJehovha ruoko mu 4-5 mazuva.
Spectrocoin akasika smartphone Apps vaya vanoda kusvika mari dzavo vanoenda. Uye vanoda ?? t vanoda kuti? The Spectrocoin chikwama iri kuitwa mu Google Play, App Store uyewo Windows Store.
Basa anoshandisa mbiri chikonzero mvumo kuti Login. The ongororo kwacho haina detailed kwazvo website yavo. Kuti asimbise vanoshandisa pachavo, vanofanira kupa chikonzero pasipoti kana ID kadhi uye utility bhiri. The AML Gwaro rinopa mashoko pamusoro zvinyorwa, asi asina mashoko sei muitiro pacharo anotora kana zvose zvikafamba zvakanaka.
Rukasimbiswa vanokwanisa Takudzai zvavo Spectrocoin kadhi kunonyanyisa 10000 USD kamwe. Spectrocoin anobvumira Max 2 ATM kwema pazuva, mune yaipedzerwa 2000 USD. Haiperi nokuti Pos kushandiswa uye zvinosimbiswa vanoshandisa Spectrocoin anopa Pos mutoro mabasa zvakare. Kana Spectrocoin kadhi zvinosimbiswa, zviri anogona kugamuchira mari kubva bato yechitatu vatengesi akafanana PayPal uye Gambling nzvimbo. Kana mari iri vakagamuchirazve ane kadhi unverified, Mari idzi dziri akarwiswa kusvikira kadhi iri rukasimbiswa.
Unverified vanoshandisa anogona kushandisa Spectrocoin mabasa, Zvisinei vari ipapo pachena kuti zvimwe. Kufadza pamusoro-up yakawandisa chete 2500 USD. At ATMs unverified vanoshandisa vanokwanisa kurega chete 200 USD panguva imwe chete nguva, 400 USD daily kubva kunonyanyisa 2 kwema. Total ATM kushaya muganhu nokuti unverified vanoshandisa ndiko 1000 USD. Pane rimwe divi, kunyange unverified vanokwanisa tenga paIndaneti kana kubhadhara panguva Pos zviteshi risingaperi mari kubva zvavo bitcoin debit kadhi. Pos mutoro webasa haisi kuwanikwa unverified vanoshandisa.
The Spectrocoin UK yakavakirwa rave yakatanga kufamba muna 2013. The kambani Headquarter yaro Landsdowne Row, London. Vakatanga kuti ape bitcoin debit nemakadhi muna May, 2015.
Kunyange zvazvo Spectrocoin haarambi nyora varidzi dzavo zvakananga pamusoro Website, maererano Pitchbook uye LinkedIn ari bitcoin webasa Provider iri vaiva nevanhu vatatu kubva Lithuania.
Vytautas Karalevičius asati mari Spectrocoin, aiva mabasa akasiyana-siyana sezvo dzezvematongerwo zvemari mune indasitiri. Chechitatu muridzi ndiye Mantas Mockevicius ane madhigirii akawanda mune zvebhizimisi zvidzidzo dzakawanda. Justas Dobiliauskas ndiye mukuru Michina mukuru panguva startup nokuda kwake 6+ Makore ruzivo That ane yokuvaka panguva zvebhizimisi Software pamasikiro Makambani.
Pricing uye Fees
Spectrocoin epurasitiki bitcoin kadhi mari $ 9.00 / ?? 8,00 / £ 6,00, apo rakapotsa kadhi iri chete $ 0.50 / ?? 0.50 / £ 0.50. Panewo pamwedzi basa rokuchengeta muripo weUS 1 USD vose mapurasitiki uye rakapotsa makadhi. Zvisinei muripo uyu haisi mhosva kana pakuenzanisa Nhoroondo iri razero. wo, hapana basa kubhadhara, saka vanokwanisa kuedza kubva kadhi nyore uye zvakachipa.
Loading mari makadhi vakasununguka kana mari vari kuuya kubva Spectrocoin nhoroondo. Dai zvisina kudaro vachizvitakudza mari inoenderana nzira inoshandiswa: anotamisa kubva kumahombekombe akasununguka asi Via kadhi ivo murandu kusvika 5%. Kana kadhi iri waburuswa kune bitcoin chikwama, tinorasikirwa 0.5% pamwe risingamboshandisi mutariri $ 1.00 / ?? 1.00 / £ 1.00 nechimwe bitcoin tenga kwema. Saka vakawanda anotamisa nemari shoma kungadya yakawanda pakupera kwenguva mushandisi.
Kana kushandisa ATMs, Spectrocoin mhosva 2.5 USD nezvezvipfuwo mari kurega uye 3.5 USD zvimwe mari kurega. Panewo 3% mari Exchange kubhadhara kuti akapiwa kana muripo unoitwa kunze default mari. Kana kugamuchira mari kuti kadhi, ari Pos mutoro kubhadhara iri 1.99%.
Spectrocoin inopa iripo avhareji bitcoin Exchange mutengo wavo nzvimbo. The bitcoin mutengo anopiwa mu 26 mari, kusanganisira mutengo nendarama uye altcoins zvakafanana nokuputsanya zvakare. The Spectrocoin bitcoin mutengo uri mukati inogamuchirika bhidha-kupa siyana avhareji bitcoin mutengo uri pamusika.
mutengo $9.00/€ 8,00 / £ 6,00 $0.50/€ 0.50 / £ 0.50
dhirivahari 3-4 mavhiki nekukurumidza
Monthly basa nokuchengeta kubhadhara ** $1.00/€ 1.00 / £ 1.00 $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
basa kubhadhara FREE / FREE / FREE FREE / FREE / FREE
Card pamusoro achibva SpectroCoin nhoroondo 0% 0%
Card kuna Bitcoin chikwama (kutenga bitcoin) 0.5% + $1.00/€ 1.00 / £ 1.00 0.5% + $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
ATM kushaya mudzimba mari $2.5/€ 2.25 / £ 1.75 –
ATM kurega dzimwe mari $3.50/€ 2.75 / £ 2.25 –
3Rd mutoro bato 1.99% 1.99%
Normal kutumirwa (kusvika pa 3-4 mavhiki) Free –
Expedited kutumirwa (4-5 mazuva) $75/€ 69 / £ 50 –
Kuchikuva pamusoro Spectrocoin ane zvitema yellow manyorerwo ine ruvara chakagadzirwa. Kuti asanyanya kuverenga matafura sezvinoita Pricing purogiramu, asi zvakajeka mitsetse akasimbisa ne kusimbisa. Small chinhu, asi kunobatsira chaizvo kana mukomana aishandisa akatarisa ndobva tafura multiple mitsara.
Panguva bitcoin mutengo chikamu, pane chati inoratidza bitcoin mutengo kuti kupiwa timeframe. Users anogona kuverenga nyore enhoroondo mutengo zvakananga kubva chati iri chero 26 mari.
Spectrocoin Website kunyange inopa zvakawanda pamusoro mabasa, achiri haibatanidzi zvose batsira kuti ramangwana User angada. The FAQ asingadi kupa munhu kutsvaka basa. The ongororo yekufamba kwenguva hakusi detailed. Varidzi kwekambani hakuna dziri nzvimbo. mashoko aya chete zvinoita sezvisina zvakare, asi kana munhu rokushandisa ari kutsvaka chinhu uye havagoni kuwana, zvinogona kushatirisa. Nokuti izvi ezvinhu Zvisinei ari Hot Line uye Support vanofanira kukwanisa wakakwanisa.
An dzinonakidza inokosha kuwedzera ndiye Google tsvaga migumisiro Spectroin. Zvinoita sokuti vamwe vanoshandisa vaiva nenyaya kambani sezvo bitcoin Forum ane dzimwe nyaya nezvazvo vanhu vachinyunyuta pamusoro Spectrocoin nokukiya BitCoins uye kwete kuteerera queries. Spectrocoin ne saka kure havana akadzivirira pachavo pamusoro pezvinhu izvi. It Zvinonyatsozivikanwa kuti pane imwe bitcoin mukutsinhana akaunzi BitCoins hazvitongoguti njodzi, saka isu kurudzira vose kuchengetera BitCoins dzavo zvakanaka.
Max Nhamba Top kupota pazuva 2
Max Top-up uwandu pa kutengwa $10,000/€ 10,000 / £ 8.000
Max Top-up uwandu pazuva $20,000/€ 20,000 / £ 16,000
Pos mutoro *** No muganhu
Max hwose mutoro No muganhu
Max Nhamba ATM kwema pazuva 5
Max chete ATM kurega $1,000/€ 1,000 / £ 800
Max ATM kurega pazuva $2,000/€ 2,000 / £ 1,600
Total ATM kurega muganhu No muganhu
Max Pos uwandu pazuva (zvitoro) No muganhu
Max nhamba tutunura kuti Bitcoin chikwama kwema pazuva 2
Min tutunura kuti Bitcoin chikwama $2/€ 2 / £ 2
Max tutunura kuti Bitcoin chikwama $2,250/€ 2,250 / £ 2,000
Total hwose Kudzikisa kubva kadhi No muganhu
Spectrocoin kupa mabasa dzakaoma nokuti bitcoin vanoshandisa. The bitcoin debit makadhi anowanikwa zvose vanoshandisa nyika yose iri aifarira guru sezvo vakawanda bitcoin debit kadhi makambani haritsigiri US vagari. The mushandisi garo iri kuwedzerwa kuna Windows Mobile vanoshandisa kuti haasi zvichida pane dzimwe bitcoin debit kadhi rinobatsirwa. Kunyange zvazvo basa uye Pricing achiri vakadzikama, kutumirwa inodhura uye zvichemo akapoteredza Indaneti anogona unozvidzinga furure vanoshandisa pachikuva.
Bitcoin Cards Kuenzanisa